Mivonòna Hikiakiaka Ao Amin’ny Facebook, Alohan’ny Hanaovana Sonia Ny Tolotra Fifampizaràna Fiara Ao Maosko · Global Voices teny Malagasy
Mivonòna Hikiakiaka Ao Amin'ny Facebook, Alohan'ny Hanaovana Sonia Ny Tolotra Fifampizaràna Fiara Ao Maosko
Voadika ny 12 Jona 2016 8:55 GMT
Sary fampahafantarana avy amin'ny tolotra fifampizaràna fiara DeliMobil
Toy ireo tanàndehibe any Andrefana miaraka amin'ny tolotra Zipcar, tanàna iray manana hery goavana ho an'ny fandraharahàna fifampizaràna fiara i Maosko : iray amin'ireo ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao ny fifamoivoizana ao aminy, ary tena lafo tokoa ny saran'ireo toerana fametrahana fiara ao afovoan-tanàna — ao anatin'ny “Garden Ring”. Ao anatin'ireny toedraharaha ireny, maro ireo olona no tsy nila nisaina be akory talohan'ny nanaovany sonia ireo fifanarahana tamin'ireo orinasa goavan'ny fifampizaràna fiara ao Maosko, DeliMobil sy Anytime (izay samy tamin'ny taona lasa iny no nitsofoka tamin'io fandraharahàna io). Manana zavatra hafa ivelany ampiarahany amin'io koa anefa ny DeliMobil : fanohanana avy amin'ny governemantan'ny tanànan'i Maosko.
Tao anatin'ny volana vitsy monja, voarohirohy taminà fifandonana teny an-dàlana ny sasany tamin'ireo mpamilin'ny DeliMobil ary niharam-pahavoazana ny fiaran-dry zareo. Raha tsy azo nosorohana ny loza, gaga ireo mpamily fa tsy maintsy mizaka ny sarany avo amin'ny fanamboarana ny simba ry zareo, tsy araka izay noheverny. Tamin'ny filazàny fa natao izay hinoan-dry zareo fa 20 isanjato amin'izay rehetra mety ho fanamboarana no ho andraikitr'izy ireo, dia ny fanamboarana manontolo no nasaina naloany, ho fanampin'ireo vola hafa aloa, toy ny 20 isanjato hafa amin'ny sanda manontolon'ny fanamboarana sy ny famenoana ny banga nandritry ny fotoana tsy nihetsehan'ny fiara ho an'ny DeliMobil. Raha tsy vitan'ireo mpamily ny mandoa ireny vola ireny avy hatrany, dia miakatra manaka-danitra ny sazy.
Tena nosarihana hino tokoa ve ireo mpamily fa ho 20 isanjaton'ny sandan'ny fanamboarana ihany no ho anjaran-dry zareo raha sendra misy tranganà fifandonana? ireo pikantsary avy ety anaty aterineto nalaina tamin'izay nozarain'ny departemanta mikarakara ny mpiasa ao amin'ilay orinasa no toa manome hevitra manohana io filazana io. Ny tsanganan'ny DeliMobil nataony ho an'ireo “fanontaniana fametraka matetika” ao amin'ny tranonkalany dia mivaky hoe, “Manana fiantohana OSAGO daholo ny fiaranay. Raha toa ny fiara iray simba noho ny hadalàn'ny mpanjifa, dia 20 isanjaton'ny fandaniana amin'ny fanamboarana […] alaina amin'ilay mpanjifa, raha mihoatra ny 100.000 robla [$1,500] ny sandan'ny fanamboarana.”
Nozarain'i Alexander Semenov, mpanjifa iray main'ny politika momba ny fanamboarana ny simba avy amin'ilay orinasa DeliMobil, tao amin'ny media sosialy ny tantarany ary nahazoany fanohanana avy amin'ny “Blue Buckets”— vondrom-piarahamonina iray aty anaty aterineto natokana hiadiana amin'ny kolikoly eny amin'ny arabe sy ny làlamben'i Rosia. Lazain'i Semenov fa nitakiana 588.300 robla (efa ho $9,000) izy ho totalin'ny asa natao taminà Hyundai Solaris iray, na dia mitentina 537.000 robla monja aza (eo amin'ny $8,200) ny fiara vaovao.
Nitarainan'i Semenov ny hoe nitakiana masombola tsy ara-drariny izy, ary an-jatony amin'ireo mpampiasa Facebook no niaiky izany. Kanefa, nitondra fanehoankevitra tao amin'ny Facebook-ny ny mpitondra teny avy amin'ny DeliMobil, nitondra fanazavàna lavabe ary tsy nahitàna fitserana na kely aza fa hoe izay ny politikan'ny orinasa dia izay no izy, ary nilaza mihitsy aza fa ny fitarainan'i Semenov (sy ireo famoahambaovao rehetra izay nitatitra azy io) dia mety hivadika ho fanalàna baraka ny DeliMobil.
Lahatsary fampahafantarana ny tolotra DeliMobil.
Taty aoriana kely , Ilya Krasilshik, talen'ny fanontàna ao amin'ny Meduza, tranonkalam-baovao manana foibe ao Latvia, dia nizara pikantsary tamin'ity fandrahonana ity ho fanenjehana azy ho nanàla baraka, vao mainka nanampy trotraka ny adihevitra efa mahamay tety anaty aterineto. Noho ny fisian'ny fifamatorana akaiky eo amin'ny DeliMobil sy ireo manampahefana ao amin'ny tanànan'i Maosko, saiky avy hatrany dia nivadika ho resaka politika ilay adihevitra.
Namaly bontana avy eo ilay orinasa manao fifampizaràna fiara, tamin'ny famoahana fa hoe nanandrana ny handrahona ny DeliMobil i Semenov, tamin'ny filazana fa hiezaka hanamaivana ny tsindry avy amin'ny media raha toa ilay orinasa ka mampihena ny vola tokony haloany. (taty aoriana i Semenov dia niakiy fa nanao io sosokevtra io nandritry ny fihaonany tamin'ireo solontenan'ny DeliMobil.)
Ny andro nanaraka io indrindra dia nampidirin'ny DeliMobil ny drafitra iray vaovao ho an'ny fifampizaràna fiara. Lasa lafo kokoa ankehitriny ny sandan'ny fanofàna isanandro ( niakatra 7 hatramin'ny 10 roba isa-minitra ao anatin'ny fiara DeliMobil iray), saingy tafiditra amin'ilay drafitra koa izao ny fiantohana ny fiara. Araka ny famaritana fohy izay natolotr'ilay orinasa, raha misy loza mitranga dia mety handoa tsy mihoatra ny 10.000 robla ny mpanjifa ($150). Ny tale jeneralin'ilay orinasa dia nanambàra fa nisy ihany koa ny fanavaozana natao tamin'ilay drafitra teo aloha : ny ambony indrindra amin'ny vola aloan'ny mpanjifa raha misy lozam-pifamoivoizana dia hoferana ho 150.000 robla ($2,300) raha be indrindra. Ireo mpanjifa nampandoavina hatrany amin'ny antsasaka tapitrisa robla tany aloha (telo no fitambarany, anisany i Alexander Semenov) dia tsy ho handoa afa-tsy 150.000 robla sisa.
Raha nanoratra tao amin'ny Facebook, niarahaba ilay vaovao i Semenov, dia nisaotra ireo namany sy ireo mpamakiny tamin'ny fanohanan'izy ireo. Nilaza mihitsy aza ny DeliMobil fa hiverina handinika ny politikan'ny orinasa, manoloana ny hetsika anaty media sosialy.
Na teo aza ny filazana vaovao ratsy tety anaty gazety momba ity tantara ity, manan-javatra ho ankalazaina ihany koa ny DeliMobil : noporofin'ilay orinasa ny fifantohany amin'ireo mpanjifany, ary ny fahafahany mamaly ireo fitarainana momba ny tolotra avy aminy. Kanefa, dia mbola olana iray hafa na midika io na tsia fa hoe fanamby azon'ny ankamaroan'ireo ambany fidirambola idirana tsara mihitsy ny indostrian'ny fifampizaràna fiara ao Maosko. Mba hamahàna amin'ny fomba lafatra ireo olana rehetra momba ny fifampizaràna fiara ao andrenivohitr'i Rosia, mamorona olana vaovao ho azy tenany ihany amin'ny fomba mazava ilay fandraharahàna.